White Fox – Studio – MMANIME
The Devil IsaPart-Timer! The Devil isaPart-Timer : Hataraku Maō-sama (အစအဆုံး mmsub) Ep 1-13 ဒီကားလေးကတော့ ကြာပါပီ။ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေတော့များမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းသဘောသိရအောင် နည်းနည်းပြောပြမယ်။ အာ့မှလဲကြည့်ချင်စိတ်ပေါ်လာကြမှာ..(စာအဆုံးထိဖတ်ပါနော်) Ignora သမုဒရာအထက်မှာတည်ရှိတဲ့ အလယ်ကျွန်းနဲ့အတူ ကျွန်းလေးခု ၀န်းရံထားတဲ့ တိုက်ကို Ente Isla လို့ခေါ်တယ်.. အဲ့မှာလက်ရှိ ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင်ကြောက်နေရတာက Underworld ရဲ့ နတ်ဆိုးဘုရင် Satan ပေါ့ လက်ရှိအလယ်ကျွန်းမှာ အုပ်စိုးထားပြီးတော့ သူ့လက်အောက်မှာ Alciel, Lucifer, Malacoda, နဲ့ Adramelech. General ကြီးလေးယောက်ရှိတယ်။ Satan က ဘေးပတ်လည်က ကျွန်းလေးခုကို ကျူးကျော်ဖို့ သူ့စစ်သူကြီးတွေကို စေလွှတ်လိုက်ပေမဲ့ လူသားတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက် ထွက်ပေါ်လာတယ်. အဲ့ သူရဲကောင်းက ကျူးကျော်လာတဲ့ Lucifer,Malacoda နဲ့ Adramelech သုံးယောက်လုံးကို ပြန်တိုက်ထုတ်ပြီး Satan ရှိတဲ့ အလယ်ကျွန်းဆီ သူ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ရောက်လာရော.. အဲ့မှာ အခြေအနေမကောင်းတော့ Satan နဲ့ သူ့ General Alciel က Portal တစ်ခုဖန်တီးပြီး ...